सिधा कुरा टिमले अष्ट्रेलिया जान केटि मिलाई दिन्छु भन्दै मलाइ फसाए भन्ने शालिकरामको आरोप निराधार, भेटिए यस्ता प्रमाण ! – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/सिधा कुरा टिमले अष्ट्रेलिया जान केटि मिलाई दिन्छु भन्दै मलाइ फसाए भन्ने शालिकरामको आरोप निराधार, भेटिए यस्ता प्रमाण !
लामीछाने आफैले आफु पत्रकार नरहेको र आफुलाई प्रेसपास नचाहिने बताएका थिए । प्रेस काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले रविको सोही अभिब्यक्तिका कारण पत्रकार महासंघ लगायत संगठनले उनलाई सहयोग नगरेको बताए । यस अघि प्रेस चौतारीका अध्यक्ष गणेश वस्नेतले पनि आफु युवराजलाई भेट्न चितवन जान लागेको बताएका थिए । उनले रविको नाम लिएनन् ।source_lokmandu
नेपाली सेनामा ठूलो संख्यामा नयाँ भर्ना खुल्यो हेर्नुहोस् (विज्ञापनसहित)